Ì Nwere Mmụọ Ozi Na-eche Gị Nche?
Baịbụl anaghị akụzi na onye ọ bụla nwere mmụọ ozi na-eche ya nche. Ma, e nwere mgbe Jizọs sịrị: “Hụnụ na unu eledaghị otu n’ime ndị a dị nta [ya bụ, ndị na-eso ụzọ Kraịst] anya, n’ihi na ana m asị unu na ndị mmụọ ozi ha ndị nọ n’eluigwe na-ahụ ihu Nna m nke bi n’eluigwe mgbe niile.” (Matiu 18:10) Ihe a o kwuru apụtaghị na onye ọ bụla nwere mmụọ ozi na-eche ya nche. Kama, ihe Jizọs na-ekwu bụ na ndị mmụọ ozi nwere mmasị n’ebe onye ọ bụla n’ime ndị na-eso ụzọ ya nọ. N’ihi ya, ndị na-efe Chineke otú ọ chọrọ anaghị eme ihe ga-emerụ ha ahụ́ ma ọ bụ ihe ga-ata isi ha, na-eche na ndị mmụọ ozi Chineke ga-echebe ha.
Ọ̀ pụtara na ndị mmụọ ozi anaghị enyere ndị mmadụ aka? Mba. (Abụ Ọma 91:11) Ụfọdụ ndị kwetasiri ike na Chineke ejitụla ndị mmụọ ozi ya chebe ha ma ọ bụ duzie ha. Kenneth anyị kwuru gbasara ya ná mbido Ụlọ Nche a bụ otu n’ime ha. Ọ bụ eziokwu na anyị agaghị asịrịrị na ọ bụ ndị mmụọ ozi mere ka Kenneth kpọọ nwaanyị ahụ n’ekwentị, ma ihe o kwuru nwere ike ịbụ eziokwu. Ndịàmà Jehova na-ahụkarị ihe gosiri na ndị mmụọ ozi na-enyere ha aka mgbe ha na-ekwusa ozi ọma. Ma, ebe ọ bụ na anyị anaghị ahụ ndị mmụọ ozi anya, anyị agaghị ekwuli ihe niile banyere otú Chineke si eji ha enyere ndị mmadụ aka n’ihe dị iche iche. N’ihi ya, ọ gaghị adị njọ ma anyị kelee Onye Pụrụ Ime Ihe Niile maka otú ọ bụla o si nyere anyị aka.​—⁠Ndị Kọlọsi 3:15; Jems 1:​17, 18.
Baịbụl kwuru banyere ndị mmụọ ozi na ndị mmụọ ọjọọ. Hà dị adị? Ha nwere ike inyere anyị aka ma ọ bụ merụọ anyị ahụ́?
N’abalị bọtara ụbọchị e gburu Jizọs, ọ kụziri otú ọhụrụ a ga-esi na-ekpe ekpere.